Nzira yekutakura rezinesi rako rekutyaira pane yako iPhone | IPhone nhau
Nzira yekutakura rezinesi rekutyaira pane iyo iPhone
Nguva yakareba yapfuura, iyo General Directorate yeTraffic muSpain yakavimbisa vashandisi kuti vadzivise kukosha kwekutakura zvinyorwa zvemota pachavo, senge rezinesi rekutyaira, ITV uye kunyangwe zvinyorwa zvine chekuita neinishuwarenzi yemutero. Iye zvino unogona pakupedzisira kutora rezinesi rako rekutyaira akananga kune yako mbozhanhare yekutenda kune yepamutemo miDGT kunyorera, tinokuratidza maitirwo azvo. Yasvika nguva yekusiya mapepa akanyatsochengetwa kumba uye kukanganwa nezve kubatikana uye kana chiremera chikatibvunza zvinyorwa, nguva yezera redhijitari yasvika.
Ichi chishandiso chakatangwa mu "kutanga kuwana" muGoogle Play Chitoro uye chaipo mushure meizvozvo chakatibvumidzawo kuti chiise muIOS App Store, ndiko kuti, tichakwanisa kushandisa mashandiro matsva anopiwa neDGT kune vese vedu zvakananga kunyangwe tiine mudziyo weApple kana kana tiine chishandiso cheIOS, zvirinani inyaya dzakanaka, uye ndezvekuti aya mashandiro muSpain anoshandiswa kuve anoenderana nebasa rimwe chete, asi kwete nerimwe racho.
1 Chii chaunoda kuisa kadhi pane yako iPhone?
2 Chii chinonzi miDGT application chinotibvumidza?
3 Mvumo yekutenderera uye pepa rehunyanzvi pane yako nhare
4 Nzira yekupinda sei kune iyo miDGT kunyorera?
5 Mabasa matsva
Chii chaunoda kuisa kadhi pane yako iPhone?
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kurodha pasi miDGT application, iko kunyoreswa zviri pamutemo kweGeneral Directorate yeTraffic iyo yemahara.
Parizvino, iko kunyorera kunokutendera kuti utarise ako madhijitari mvumo uye yako huru data. Munguva pfupi, isu tichabatanidza matsva mashandiro akadai sekuzivisa uye kubhadhara masanction, kutenga fizi, kukumbira musangano kumahofisi edu kana maitiro makuru ane chekuita nemvumo yako uye mota dzako.
Paunenge iwe waisa iyo miDGT application unogona kutanga kuishandisa nekukurumidza uye nyore, kutora mukana kune ese hunhu. Izvo zvakagadzirirwa kuitira kuti isu tirege kudzivisa kutakura nesu zvese zvinyorwa zvemotokari yedu uye iwo mukana wechokwadi, kunyanya kana tisina iwo kana isu takatambura kuba kwaro kana kurasikirwa.
Chii chinonzi miDGT application chinotibvumidza?
Tinotanga nechinhu chakakoshesa, inova rezinesi rekutyaira. Kana tangoziva neiyo miDGT kunyorera isu tinokwanisa kuwana iyo data rese nezve rezinesi redu rekutyaira ine iro dhijitari vhezheni, ese mazita, mazita uye mazuva akakodzera, pamwe nerumwe ruzivo. Nenzira imwecheteyo, isu tichakwanisa kushandisa kodhi yeQR inozivisa kuzviremera pamwe nekutarisa edu akasara zviri nyore uye nekukurumidza.
Iko kunyorera zvakare kune chikamu "Changu mota", Mariri tichaona mota dzedu dzakanyoreswa dzichionekwa uye dzakabatana nerezinesi redu rekutyaira, richizivikanwa neplate rezinesi. Nekuwana iyo chikamu isu tinokwanisa kuona kuti chii chinonzi zvakatipoteredza chitambi chakapihwa kumotokari yedu, pamwe nekukurumidza tsananguro yacho inosanganisira:
Brand uye modhi
Zuva rekutanga kunyoreswa
Kuvimbika uye data reiyo yekupedzisira ITV
Inishuwarenzi chikamu uye kupera
Mvumo yekutenderera uye pepa rehunyanzvi pane yako nhare
Chimwe chinonyanya kufadza hunhu hweiyi nyowani dhijitari system yekutakura zvinyorwa ndeyekuti isu tichava nekwaniso yekuwana zvakazara zviri pamutemo uye zviripo zvekuparadzira mvumo. Sezvazviri mune rezinesi rekutyaira, tichakwanisa kuwana rezinesi rekutyaira uye zvakare QR kodhi bhatani, kodhi iyi kana yashandiswa inobvumidza vane masimba masimba kuti vaiongorore pamwe nehurongwa hwekuverenga kuitira kuti vanyatso simbisa dhata irimo, chokwadi ndechekuti yakakosha tekinoroji yekumberi kuitira kuti ikurumidze kuverenga zvinyorwa uye, pamusoro pezvose, kubvisa zvachose kunyepedzera.
Kune kesi dzemotokari diki diki diki, isu tichakwanisawo kuwana tekinoroji yemotokari uko iyo data iyo inowanzo kuenda kumashure kweiyo ITV kadhi inogona kuwanikwa. Chero zvazvingaitika, kunyangwe kana tisina pepa remagetsi, unozogona kuona pachiratidziri chekare kana mota yako iine MOT inoshanda pamwe nezuva rekupera kwayo. saka nyaya yesheetekinoroji ndiyo ingangodaro isinganetsi pane ese anowanikwa mukushandisa kweGeneral Directorate yeTraffic.
Nzira yekupinda sei kune iyo miDGT kunyorera?
Eya, yekutanga yemakomba ndiyo chaiyo nzira yekupinda mukati, nekuti kune vazhinji rinogona kunge riri basa rakaomarara kana vasina hukama nehurongwa Cl @ ve kujairika kuzivikanwa muHurumende. Chinhu chakareruka uye chakakurudzirwa ndechekuti iwe une chitupa chedigital chakaiswa pane yako iPhone, Ndinokusiya mukati IYI BHUKU, chidzidzo chinokurumidza chidiki chekuti ungaisa sei zvitupa zvedigital pane iPhone nekukurumidza. Chero zvazvingaitika, unogona kushandisa dzimwe nzira dziripo kuti uzvizivise, iyo inoita senge inoshanda kupfuura dzose.
Parizvino, iko kunyorera kuri mudiki uye munguva pfupi iri kuuya kuve nekuita kwakawanda kuitira kuti uwane kuita kwese kunogona kutarisirwa kubva kwazviri.
Nenzira imwechete tinokuyeuchidza izvozvo iwe uchiri kufanira kuunza zvinyorwa mune fomu yemuviri kana iwe usiri kuda kupihwa mvumo, sekunyeverwa kweGeneral Directorate yeTraffic.
Ichi chishandiso chiri muchikamu chakavhurika chekuyedza, saka tinokukurudzira kuti ubatsirane nesu isati yatanga, nekutitumira chero mhinduro kana mazano ekuvandudza. Isu tinokuyeuchidzawo kuti iwe unofanirwa kuenderera nekutakura zvinyorwa zvako kana izvo zvemota yako muchimiro chemuviri kudzamara iyo DGT yabvumidza mutemo unobvumidza iwe kutakura chete App uye kukanganwa nezve mapepa.
Isu tinokuzivisa iwe nekugadzirisa kwekumberi uye nhau dzekushandisa miDGT, iyo yatinogona kunyange kubhadhara faindi dzemumigwagwa nekukurumidza, hatichazove nezvimwe zvikonzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nzira yekutakura rezinesi rekutyaira pane iyo iPhone
Parizvino haisi kuwanikwa 🙁
Pindura kuna Thomas
Huye, chitoro chemaapuro chinondiudza kuti iyo app haisi kuwanikwa munyika mangu
Izvo hazvioneke kwandiri futi
App haiwanikwe munyika yako ...
Mhoroi, ndiri kuona kuti ndanga ndiri wekupedzisira kugona kuiisa panenge pa6 masikati.
App haiwanike munyika mako… pane nzira refu yekufamba usati waikwanisa kuitora
Mhoroi, yabviswa muApp Store uye hatizive kuti sei. Ichave ichiwanikwa munguva pfupi.
Isu takaiisa uye tiri kuishandisa, sevamwe vashandisi vazhinji muboka redu reTeregiramu.
Haisi kuwanikwa muApp Store
Kwete, haisi kuwanikwa paAppStore. Uri kuenda kubhaitbait kana chimwe chinhu?
Diego Rodriguez-Vila akadaro
Handioni kana. Ndizivisei kana ndiri, ndapota.
Pindura Diego Rodríguez-Vila
Haandibvumidze kana kundiudza kuti nyika yako kana dunhu hariwanikwe
Mhoro: ivo vaibvisa, kusvikira iyo yekupedzisira vhezheni. Uye nenzira, chinyorwa ichi chinofanira kutaura zvakajeka kuti, kunyangwe nechishandiso chakaiswa, haisati iri nguva yekusiya rezinesi rekutyaira nemapepa kumba; nekuda kweizvozvo, zvakafanira kubvumidza mutemo mukuita.
Ndokumbirawo mubvise chirevo "Inguva yekusiya mapepa akachengetedzwa zvakanaka pamba uye kukanganwa nezvemhirizhonga kana chiremera chikatibvunza zvinyorwa, nguva yasvika yezera redhijitari."
Ndima yekupedzisira umo inoratidzwa zvakajeka inoratidzika kunge diki kwauri?
Uye zvakare zvakashinga.
Haiwa mania yekuda kuziva yekupindura usina kuverenga zvinyorwa!
Concept vhidhiyo yeinoshamisa iPhone 12
Iyo HBO application ikozvino inobvumidza zvemukati kuti zvidzingwe kune chishandiso